I-Estate LAS VEGAS / PALESTINE
I-LAS VEGAS, Ipulazi labalimi bendabuko elitholakala kalula.Umgwaqo walo ongamboziwe ongamakhilomitha angu-6 usesimweni esihle njengoba umgwaqo wezinga eliphezulu (imoto ephansi ngokunakekela uma kunabantu abaningi)
Ipulazi linikezelwe ekukhiqizeni ikhofi nobhanana.
Indlu ingumlimi ojwayelekile, ukwakheka kwayo kanye nomkhathi kuhambisana namasiko wendawo yekhofi Izikhungo zethu zilula, zikhululekile futhi zendabuko kakhulu, azihambisani nezakhiwo noma umhlobiso wezindlu zedolobha.
Yindawo enezimila ehambisana nendawo yekhofi ekuvumela ukuthi ujabulele ukubuka izinyoni. Lapha isiko lendabuko lensimu yekhofi yaseColombia yatholwa, enechibi elikhulu lokubhukuda, i-Jacuzzi, izindawo zokuqala, izindawo zangaphandle, indawo enhle, enemizila yemvelo kanye nokuvakasha okuhlangene kwezitshalo. Indlu enesakhiwo esijwayelekile sabalimi inamakamelo amahlanu alula futhi anethezekile anokuguquguquka kokuhlalisa abantu abayi-16.
Indawo ethulile ilungele ukuhamba ngezinyawo kwemvelo, enobukhona obuncane bezimoto endaweni ezungezile. Awukwazi ukuphuthelwa ukubhukuda ezimpophomeni ze-quebrada las palomas.
Izinkathazo zakho zizoxazululwa emahoreni angu-24 alandelayo. Umqondisi uzohlala ekhona epulazini futhi ngesikhathi sokuhlala futhi kuphela uma isivakashi sikudinga, uzomphelezela futhi abonise isiko lendawo.